Dowladda Ingriiska oo Howl-galo Qarsoodi ah ka Fulisay Gudaha Somalia – Radio Daljir
Dowladda Ingriiska oo Howl-galo Qarsoodi ah ka Fulisay Gudaha Somalia
Maarso 26, 2016 3:12 b 0
Garacad, 26, March, 2016-(Daljir)_Shabakadda Wararka ee (Middle East Eye) ayaa soo ogaatay inay Ciiddanka Khaaska ee labadaasi dal si qarsoodi ugu hawlan yihiin Hawlgallo ay ka fuliyaan gudaha somalia oo ka dhan ah Maleeshiyooyinka kala taabacsan Alshabaab iyo Daacish.
Boqorka dalka Urdun, Cabdalla Bin Xuseen ayaa u sheegay Hoggaamiyayaasha Kongareeska Maraykanka inay Ciiddankiisa kala qeyb galayaan kuwa Britain dagaalladaasi.
“Waxaan leenahay Ciiddamo si degdeg ah loo daabuli karom kuwaasi oo garab taagan Milliteriga British iyo Kenya, isla markaana ay diyaar u yihiin inay ka gudbaan xuduudka Somalia oo ay gudaha u galaan Somalia” ayuu yiri Boqorka dalka Urdun oo intaasi ku daray inay Hawlgalkaas ku bilaabeen Alshabaab.
Boqorka dalka Urdun waxa uu bishii Janaayo 11-dii Kulamo la yeeshay Siyaasiyiin sarsare oo ka tirsan Guddiyadda Milliteriga iyo Xiriirka Dibedda ee Kongareeska Maraykanka.
Sidoo kale waxa uu Boqorka Urdun kulan sare la qaatay Xoghayayaasha Difaaca iyo Arrimaha Dibedda Maraykanka, Ashton Kartar iyo john Kerry.
Shabakadda Wararka ee (Middle East Eye) waxay qortay inay heleen Faahfaahinta Kulamadaasi, iyadoo uu Boqorka Urdun sheegay inay il gaar ha ku hayaan Alshabaab, wuxuuna ku sababeeyey inuusan jirin qof eegayo xaqiiqda arrintaasi, isla markaana aan lagu kala qeybsami karin qoddobkaasi, waa sida uu hadalka u yiri.
“Ciiddanka Khaaska ee British ee SAS waxay haatan ku lug leeyihiin Hawlgalladda Ciiddanka Gaarka ee Urdun” ayuu yiri Boqorka dalka Urdun, Cabdalla Bin Xuseen.
Waxa uu intaasi ku daray inay u baahan yihiin inay eegaan dhamaan goobaha kulul ee Khariidada Caalamka, wuxuuan hoosta ka xariiqay in loo baahan yahay in laga gudbo saamaynta ay leeyihiin Maleeshiyooyinka saldhigooda yahay gudaha Somalia ee kala taabacsan Daacish iyo Alqaacida, waa sida uu hadalka u yiri.
Dhinaca kale, Boqorka dalka Urdun waxa u uSiyaasiyiinta Maraykanka u sheegay in Weerarkii Alshabaab ku qaadeen Jaamacadda Garissa kadib inuu Madaxweynaha Kneya, Uhuru Kenyatta ilmo ka soo hooreen indhahiisa sababo la xiriiray xasuuqii in ka badan 100 Arday loogu geystay Jaamacadaasi iyo inaysan jirin cid ka fal-celisay.
Dhinaca kale, Boqorka dalka Urdun ma sheegin tiradda Ciiddanka Khaaska ee British iyo kuwa Urdun ee ka qeyb galayo Hawlgalka ay ka fulinayaan gudaha Somalia.
Ma aha markii ugu horreysay ee Ciiddanka Khaaska ee British ee SAS Troops la sheego inay Hawlgallo Milliteri ka fulinayaan Somalia.
Sannadkii 2012-kii, Wargeyska Daily Star ayaa qoray ilaa 60 Komaandooska Britishka inay Ciiddanka Kenya kala shaqeynayaan si ay u beegsadaan Alshabaab.
Xasan Shekh oo ku Baaqay in Dagaalka Al-shabaab lagula jiro la xoojiyo